Tags : လမ်းဆုံဆိုတာ ဆုံဆည်းခြင်းရဲ့ အဆုံးသတ်အမှတ်ဖြစ်သလို ခွဲခွာခြင်းရဲ့ အစမှတ်တစ်ခုလဲဖြစ်တယ် ....
By : mrcastle on May 22, 2010
Score: 145 Rating: 5.00 Comments: 29
လမ်းဆုံမှာ ရပ်နေတဲ့ လူနှစ်ယောက်တော့ တွေးနေတယ် ဘယ်သူလဲကွယ် .... မင်းရယ်တို့ရယ် .... ငိုချင်သောမျက်လုံးများဟန်ဆောင်ကာထိန်းလဲ သူသိတယ် .. ကိုယ်လဲသိတယ် .....။
summung on May 27, 2010 0
songlover015 on May 26, 2010 0
အရမ်းကောင်းပါတယ်~~********** ((သွားမယ်ဆိုသွားပါစေ..လမ်းဆုံ ကြီးမှာ မော်တော်ကားတွေတိုက်ကုန်မယ်....ပေါင်းမရရင် စားလိုက် brother)) :P
bro castle so yin tot, pyaw sayar ma lo tot boo.. UNIQUE voice, love it :) ****************************************************
maureen on May 23, 2010 0
အစ်ကိုကာဆယ်ရေ...ဆိုသွားတာ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်...တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြန်ဆုံနိုင်ဦးမှာပါ...သီချင်းတွေဆိုပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ်....နားဆင်အားပေးလျက်..************************ for u...
missasean on May 23, 2010 0
အရမ်းကို ကောင်းပါတယ် အကိုရေ...၂ခါပြန်ပြီး နားထောင်သွားတယ်နော်....5******* :)))
brother MrC,,,,,another Brilliant song of you,,,,,always sing with perfect voice,,,,that's why you are one of my favourite singers here in SFY................5**********************so neat*****************
လမ်းဆုံးသွားပီလား ဘရာစာ ကြီး....အယ်...ငါ့အတိုကြီး..ဆိုရင်.. မျက်ရည်တွေကျနေတယ်ကြည့်စမ်း...ဘယ်လောက်များ..ဖီလ်းနဲ့ ဆိုနေသိဘူး...ဟိဟိ... မိုက်တယ်...ညီ အငယ်ဆုံးလေး..အားပေးနားဆင်သွားပါပီခင်ဂျ...
တယ်ဆိုတဲ့စာပါရားးးး???? ဆြာဂျီး :haha အယ်.......!!!! လက်စတ်တတ်တော့ လမ်းဆုံမှာ "ဂျမ်းပုံ "နဲ့ အသည်းကွဲဇာတ်လမ်းလေးဖစ်သွားခဲ့သကိုးးးးးး :O:O ကဲ ,,, ကဲ ပါမှဝမ်းနည်းငိုမနေပါနဲ့လေ |-: *********************လေးတေနဲ့ပဲဖြေသိမ့်လိုက်ပါရော့ အဟီးဟီးဟီးးးးးးးး:)))))))))) :D :P >> :atb ဘရာဗိုဗိုဗို>>>> ဘရိုဂျီး F4 ဂျီး ရမ်းမိုက်ရယ်ချင့် :cool >>>>>
Your style is slightly different from Zaw Paing's but again beautifully and neatly sung! Enjoyed it very much. 5*
Bravo!! that's composed & originally sang by u)aungkolatt(The Brothers).. I liked it since then.. and ko)castle, you made it nicely too.. (sorry that i couldn't vote million stars here as system doesn't allow to vote twice from same IP).. Virual*&cheers!
really nice2listen par bro yay.. arr pay narsin thwar par tel .. 5***** :-)
Oww..ကောင်းလိုက်တာ ဘရိုရေ..ဆိုထားတာလုံးဝ ရှယ်...အသံလေးကလဲ ကြည်လင်နေတာဘဲ..အရမ်း ကြိုက်တယ်..အားပေး နားဆင်သွားပါတယ်...:atb..*****************For Bro.....
lwanwaikyaw on May 22, 2010 0
~နားထောင်လို့အရမ်းကောင်းတယ်ဘရို mrcastleရေ~~ အသံကြည်ပြီးငြိမ်နေရောဗျာ~~အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်~~**********း
နားထောင်လို့အရမ်းကောင်းတယ် bro ရေ.... အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်ရှင်....5*****))))))))))))
ရက်ရက် စက်စက် ကောင်းတယ်ကွာ... ကိုရဲတိုက် ကိုမိုးလူ စည်သူနောင်..အကောင်းဆုံးလူ..ကိုဇာမောင်.. etc တို့စုပေါင်း Stereo ဆီးရီးတခွေလောက်ထုတ်ပါလား...ရန်ကုန်က ဆရာတွေ နားသွားရမယ်..
You can sing very well any songs!!!! Nice one par *****
great singing ......love it .......
Very Nice&Great attachment singss par bro F4.......Nice to listen this song.....bravooo:****:***:****>>>>>>
Bravo! really perfect with your vocal....enjoy listening... all* and cheers!
Goood as Ever***********
hi mrcastle, Haveagreat voice. Perfect singing. 5* for u. Keep going.
bro gyi kg hla chi lar....very nice one.....
very nice.... *****4U..
:))>.. ဘယ်သူနဲ့ ပေါင်းစပ်လို့မရတာလဲ ဘရိုကြီး.... ဟီးဟီး..... အရမ်းကောင်းသော ဂျပန်သီချင်းလေးပါ.... :atb......
အမြဲတမ်း ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်လေးနဲ. ကောင်းအောင်ဆိုတတ်တယ်နော် ~~ဒီသီချင်းလေးကို ဆိုထားတာလည်း တစ်မျိုးထူးထူးခြားခြားလေးနဲ. နားထောင်လို.အတော်ကောင်းတယ် ~~